Soo Iibso Kormeerka Cadaadiska Dhiigga & Fududeeyaha Wadnaha Fudud ee Oximeter - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Kormeerka Cadaadiska Dhiigga & Oximeter Cirbadda Farta La qaadan Karo
$ 55.10 qiimaha joogtada ah $ 69.75
Kormeerka Cadaadiska Dhiigga & Oximeter Cirbadda Farta La qaadan Karo gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
size:18 * * 14.5 9cm
Nooca:Kormeerka cadaadiska dhiigga & Qalliinka Oximeter-ka
Qashin ay ku jirto: hal kormeeraha cadaadiska dhiigga iyo hal farta wadnaha istaarka mitirka mitirka BP Monitor Hordhac kooban: Waxay ka kooban tahay jirka ugu muhiimsan iyo suunka gacanta, oo ku habboon dhiig karka aadanaha iyo cabirka garaaca wadnaha. Qiyaasta cadaadiska dhiigga ee sheyga ayaa u dhigma cabirka auscultation. Mitirka cadaadiska dhiigga elektiroonigga ah wuxuu qaataa habka cadaadiska caqliga, kaasoo hagaajin kara cadaadiska dhiiggaaga si ugu habboon si otomaatig ah iyadoo loo eegayo qiimahaaga cadaadiska dhiigga. Waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa raaxo-darrada ay keento cadaadis aan sax ahayn, waxay gaabin kartaa waqtiga cabirka, waxayna dheereyn kartaa nolosha adeegga gacanta isla mar ahaantaana mitirka cadaadiska dhiigga wuxuu leeyahay shaqada xusuusta 90 koox oo cabbiraya xogta laba qof, taas oo badbaadin karta xogta si gooni gooni ah. Waxay soo bandhigi kartaa celceliska aqrinta 3-dii koox ee ugu dambeeyay natiijooyinka cabbirka. Tilmaamaha muuqaalka: 1) Cabbiraad: Qiyaasta Buck 2) Natiijooyinka waxay muujiyeen in: cadaadis sare / cadaadis hoose / garaaca wadnaha 3) Isbaddalka halbeegga: unugyada cadaadiska dhiigga Kpa / mmHg beddelidda (qeybta hore ee bootku waa mmHg) 4) Kooxda Xusuusta: Laba nooc oo xusuus ah, midkiiba 99 cabir natiijooyinka xasuusta 5) Waxqabadka saacada: Xilliga sanadka, bisha, maalinta, saacada, daqiiqada; 6) Tijaabinta Awoodda Hoose: xaalad kasta oo shaqo oo lagu ogaanayo awood hoose, bandhigyo LCD ah " "calaamadu waxay keentaa awood hoose 7) Tilmaame kala soocida cadaadiska dhiiga: kala soocida cadaadiska dhiiga waxay muujineysaa cadaadiska dhiiga Caafimaadka 8) Shaqada ilaalinta culeyska xad dhaafka ah: cadaadiska ka sareeya 295mmHg (20ms) si otomaatig ah ayuu dhaqso ugu daalayaa 9) Shaqada koronto otomaatiga ah: Wax ficil ah malahan 1 daqiiqo kadib si otomaatig ah xiritaanka 10) Dhawaaq garaaca wadnaha oo degdeg ah (kaliya qaylada) 11) Cabbiraadda waa la dhammeeyaa dhawaaqa digniinta. 12) Qalabka koronto-qabadka iyo adabtarada waa ikhtiyaari. 13) Ma ahan qaabka hadalka. Fingertip Pulse Oximeter Faahfaahinta Waxyaabaha Maqalka: - saxsanaanta lagu kalsoonaan karo iyo cimri dhererkeeda - Laba Muuqaal OLED, afar qaab bandhig. - 4-Muujin Muujin la hagaajin karo. - Tilmaame danab hooseeya, Hubsiimo waqtiga-dhabta ah. - Isticmaal awood yar, 50 saacadood oo xiriir ah oo shaqeynaya. - Buuxinta Yar ≤0.4% - Awood otomaatig ah oo go'an markii aan la helin calaamado - Miisaanka yar iyo kan fudud, oo ku habboon in la qaado - Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay isbitaalka, daryeelka caafimaadka guriga, baarka oksijiinta, xarunta caafimaadka bulshada, aagga alpine, daryeelka caafimaadka isboortiga iwm. Calaacsan faraha Oximeter: Qeexitaanka
si aad udheer